Nhau - Chinzvimbo chepamusoro gumi pasi rose LCD vanogadzira skrini
Chiyero chevane gumi epamusoro epasirese eLCD vagadziri
Nekukurumidza kusimukira kweindasitiri yekuratidzira yenyika yangu, chimiro cheindasitiri yekuratidzira chepasi rose chave neshanduko huru. Parizvino, indasitiri yeLCD inonyanya kutariswa muChina, Japan neSouth Korea. Nekuburitswa kwehunyanzvi hutsva hwekugadzira kwevanogadzira mainland mapaneru, mainland China ichava nzvimbo huru yekugadzira LCD yepasirese munguva pfupi iri kutevera. Saka, ndedzipi gumi dzepamusoro LCD vanogadzira skrini munyika uye vanomira sei?
LG Display (zita rechiChinese rinonzi LG Display) parizvino ndiyo iri nhamba 1 pasi rose kugadzira mapaneru eLCD, yakabatana neLG Group, ine muzinda kuSeoul, South Korea, ine R&D, kugadzira nekutengesa masangano muChina, Japan, South Korea, uye United States uye Europe.
LGDisplay's vatengi vanosanganisira Apple, HP, DELL, SONY, Toshiba, PHILIPS, Lenovo, Acer, uye vamwe vepasi-kirasi vatengi zvigadzirwa zvemagetsi. Apple's iPhone4, iPhone4S, iPhone5, iPad, iPad2, TheNewiPad uye yazvino iPadmini zvese zvinoshandisa LG Display's liquid crystal display panel.
Samsung Electronics ndiyo yeSouth Korea hombe yemagetsi maindasitiri kambani uye yakakura inotsigira yeSamsung Group. Mukupera kwema1990, Samsung Electronics 'yakazvimiririra tekinoroji kuvandudza uye yakazvimirira chigadzirwa hunyanzvi hwekuvandudza hunyanzvi hwakawedzerwa. Magadzirirwo ayo ekugadzira zvigadzirwa akasimbisa "inotungamira tekinoroji, ichishandisa tekinoroji yepamusoro kugadzira zvigadzirwa zvitsva padanho rekutanga kusangana nepamusoro-soro zvinodiwa pamusika." Pamusoro peiyo inofananidzira musimboti, inosimbisawo chirevo chekufananidza che "tekinoroji inotungamira, kushandisa tekinoroji yepamusoro kugadzira zvigadzirwa zvitsva, kugadzira zvitsva zvinodiwa uye misika mitsva yepamusoro".
Innolux inyanzvi yeTFT-LCD panel inogadzira kambani yakavambwa neFoxconn Technology Group muna 2003. Fekitori iri muShenzhen Longhua Foxconn Technology Park, ine mari yekutanga yeRMB 10 bhiriyoni. Innolux ine yakasimba yekuratidzira tekinoroji yekutsvagisa uye timu yekusimudzira, yakasanganiswa neFoxconn yakasimba kugadzira hunyanzvi, uye inonyatso kushandisa mabhenefiti ekubatanidza yakatwasuka, iyo ichaita mupiro wakakura mukuvandudza mwero wepasirese-panel kuratidza indasitiri.
Innolux inoitisa kugadzirwa uye kutengesa mashandiro nenzira imwechete-yekumira, uye inopa mhinduro dzese kune vatengi system yeboka. Innolux inokoshesa zvikuru kutsvagisa nekuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva. Zvigadzirwa zvenyeredzi zvakadai senharembozha, maDVD anotakurika uye akaiswa mumotokari, makamera edhijitari, magame consoles, uye PDA LCD skrini zvakaiswa mukugadzirwa kwakawanda, uye vakakurumidza kubata musika kuhwina mikana yemusika. Patents dzinoverengeka dzakawanikwa.
AU Optronics yaimbozivikanwa seDaqi Technology uye yakavambwa muna Nyamavhuvhu 1996. Muna 2001, yakabatana neLianyou Optoelectronics ndokuchinja zita rayo kuita AU Optronics. Muna 2006, yakawana Guanghui Electronics zvakare. Mushure mekubatanidza, AUO ine mutsara wakakwana wekugadzira wezvizvarwa zvese zvemahombe, epakati uye madiki eLCD mapaneru. AU Optronics zvakare ndiyo yekutanga pasi rose TFT-LCD dhizaini, kugadzira uye R&D kambani kunyorwa pachena paNew York Stock Exchange (NYSE). AU Optronics yakatungamira mukuunza chikuva chesimba rekutonga uye yaive yekutanga kugadzira pasi rose kuwana ISO50001 simba rekutonga system certification uye ISO14045 eco-efficiency assessment chigadzirwa system verification, uye yakasarudzwa seDow Jones Sustainability World muna 2010/2011 uye 2011/2012. Index constituent stocks inoisa chiitiko chakakosha kuindasitiri.
Yakavambwa muna Kubvumbi 1993, BOE ndiyo hombe yekugadzira mapaneru ekugadzira muChina uye mupi weInternet weZvinhu tekinoroji, zvigadzirwa nemasevhisi. Mabhizinesi makuru anosanganisira midziyo yekuratidzira, smart system uye hutano masevhisi. Zvigadzirwa zvekuratidzira zvinoshandiswa zvakanyanya munharembozha, mahwendefa emakomputa, makomputa emabhuku, mamonitor, maTV, mota, zvinopfekwa nemimwe minda; masisitimu akangwara anovaka mapuratifomu eIoT ezvitoro zvitsva, zvekufambisa, mari, dzidzo, hunyanzvi, zvekurapa uye mamwe minda, zvichipa ""Hardware zvigadzirwa + software chikuva + mamiriro ekushandisa" mhinduro yakazara; bhizinesi rebasa rehutano rinosanganiswa nemushonga uye tekinoroji yehupenyu kusimudzira hutano hwenhare, mushonga wekuvandudza uye O + O mabasa ekurapa, uye kubatanidza hutano hwepaki zviwanikwa.
Parizvino, kutakura kweBOE mumanotibhuku LCD skrini, flat panel LCD skrini, nharembozha LCD skrini uye mamwe minda yasvika nhamba yekutanga yenyika. Nekupinda kwayo kwakabudirira muApple's supply chain, BOE ichava yepamusoro-soro yepasi rose maLCD vagadziri vepaneru munguva pfupi iri kutevera.
6, Yakapinza (SHARP)
Sharp inozivikanwa se "Baba veLCD Panels." Kubva payakavambwa muna 1912, Sharp Corporation yakagadzira yekutanga pasirese Calculator uye liquid crystal kuratidza, inomiririrwa nekugadzirwa kwepenzura mhenyu, ndiko kwakabva zita rekambani iripo. Batsira kufambiro mberi.
Iyo kambani inotarisira "kugadzira kambani yakasarudzika muhupenyu hwezana ramakore re21" kuburikidza ne "njere" isingaenzaniswi uye "kufambira mberi" kunopfuura nguva. Sekambani yekutengesa inoshandisa vhidhiyo, midziyo yemumba, nharembozha uye zvigadzirwa zveruzivo, iri mumaguta makuru munyika yose. Misa bhizinesi mapoinzi uye kuvaka yakakwana mushure mekutengesa sevhisi network kuti isangane nezvinodiwa nevatengi. Sharp yakatorwa na Hon Hai.
Yakavambwa muna 1971, Chunghwa Picture Tubes yakazvipira mukuvandudza tekinoroji yekuratidzira. Kubva pakuenderera mberi kwekugadzira dhizaini nekutsvaga nekusimudzira, yakaunza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kuti zvisangane nezvido zvevanhu zvekunakidzwa nekuona.
Chunghwa Picture Tubes ine ruzivo rwakapfuma muR&D uye kugadzirwa kwakawanda kwezvigadzirwa zvevhidhiyo, zvakasanganiswa nehunyanzvi hwekuita senge angles yekuona, kupindura nekukurumidza uye kuzara kwemavara, uye inogara ichivhura zvigadzirwa zvitsva, inovandudza mhando yechigadzirwa uye masevhisi, uye inoshandisa "kusika hunyanzvi." , kutsvaga kukwana, uye kubatana "Uzivi hwebhizimisi hwe "kushandira pamwe" hunozvipira kutsvagurudzo nekuvandudzwa kwemhando yakazara yezvigadzirwa kubva kudiki kusvika kuhukuru hukuru, uye inoshingairira kuvavarira kuvandudza mune zvese-kutenderera optoelectronic tekinoroji, kuva mutungamiriri mu. indasitiri yemavhidhiyo.
Toshiba iboka rinozivikanwa remabhizinesi emarudzi akawanda ane nhoroondo yemakore 130, ane bhizinesi rakasiyana-siyana, rinosanganisira kuvakwa kwezvivakwa zvemagariro, midziyo yemumba, zvigadzirwa zvedhijitari, zvikamu zvemagetsi uye mamwe minda yebhizinesi, inovhara anenge ese maficha ekugadzira uye hupenyu. Toshiba ine yakakura R&D institution muJapan. Kuburikidza nekuvandudza hunyanzvi uye budiriro, Toshiba agara ari pamberi pesainzi yenyika uye tekinoroji. Kubva pakuparura michina yekuwachisa yeJapan yekutanga, mafiriji nemimwe midziyo yemumba, kusvika pakuvandudza komputa yekutanga yebhuku rekunyorera, yekutanga 16MB flash memory, diki pasirese 0.85-inch HDD; kugadzira yepamusoro HDDVD michina; vachitsvaga nekugadzira zviratidziro zvitsva zveSED, Toshiba yakagadzira "nyika dzekutanga" uye yakabatsira kushandura hupenyu hwevanhu kuburikidza nekuenderera mberi kwehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji. Nguva pfupi yadarika, Toshiba arikubvisa zvishoma nezvishoma kubva kumidziyo yemumba uye misika yezvigadzirwa zvemagetsi uye achivandudza maindasitiri ane zvemhando yepamusoro tekinoroji.
Tianma Microelectronics yakavambwa muna 1983 uye yakanyorwa paShenzhen Stock Exchange muna 1995. Ikambani yehunyanzvi hwehunyanzvi inopa mhinduro dzekuratidzira uye rutsigiro rwesevhisi yekukurumidza kune vatengi vepasirese.
Iyo kambani yakazvimiririra inotungamira matekinoroji anosanganisira LTPS-TFT, AMOLED, inochinjika kuratidza, Oxide-TFT, 3D kuratidzwa, kuratidzwa kwakajeka, uye IN-CELL/ON-CELL yakabatanidzwa kubata kutonga. Kambani iyi ine national engineering laboratory yeTFT-LCD makiyi emidziyo uye tekinoroji, iyo yenyika-nhanho bhizinesi tekinoroji nzvimbo, post-doctoral mobile workstation, uye inoita akati wandei-chikamu-chikamu mapurojekiti akakosha seNational Development and Reform Commission. , Bazi reSainzi neTekinoroji, uye Bazi reMaindasitiri neRuzivo rweTekinoroji. Iyo kambani yakasimba tekinoroji uye kugona kwesainzi kutsvagisa kwave kuve musimboti webudiriro yekambani.
Kyocera Corporation yakavambwa muna 1959 semugadziri wehunyanzvi hwekeramics. Tekinoroji ceramics inoreva nhevedzano yezvigadzirwa zvepamberi zvine akasiyana emuviri, makemikari uye zvemagetsi zvivakwa. Nhasi, zvizhinji zvezvigadzirwa zveKyocera zvine chekuita nenharembozha, zvinosanganisira semiconductor components, radio frequency uye microwave product package, passive electronic components, wireless mobile phones and network equipment, crystal oscillators and connectors, uye optoelectronic products anoshandiswa muoptoelectronic communication network.
Nguva yekutumira: Nov-23-2021